CHIA SEED ဆိုတာ..... | The Restaurant Guides for Myanmar
CHIA SEED ဟာ Mexico နဲ့ တောင်အမေရိက ကနေ စတင်အသုံးပြု ကြ ပြီး ''Superfood'' လို့ လူသိများလာကြတဲ့ Product တစ်ခုပါ။
ကျန်းမာရေးလိုက်စားပြီး အလှအပ ထိန်းသိမ်းကြတဲ့ Singaporean တွေ ကြားမှာလည်း Popular ဖြစ်လာနေပါတယ်။
>>> CHIA SEED ဆိုတာ.....
(၁).ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ပင်ပွားစေ့ နဲ့ ဆင်တဲ့ အစေ့လေးတွေပါ။
(၂).၁၅ မိနစ်လောက်ရေစိမ်လိုက်ရင် ပင်ပွားစေ့လိုပွလာပါတယ် ရေကြာကြာပိုစိမ် ထားရင် ပိုပွပြီး ပိုပွားလာပါတယ် (အနည်းငယ်မျှ ချွဲပါတယ်)
(၃).အရသာကတော့ ပင်ပွားစေ့လို ချိုဖန်ခါး ဘာအရသာမှမရှိပါ ဘူး။
(ဆီးချို၊ သွေးချိုသမားများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်)
>>>CHIA SEED က ဘာတွေ ကောင်းတာလဲ
(၁).Fiber အမျှင်ဓာတ်တွေ အများကြီးပါလို့ ဝမ်းသွားရ လွယ်ကူစေပါတယ်။(အမျှင်ဓာတ်များတဲ့ အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို နေ့တိုင်း သတိ ထားပြီးစားနေဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် တော့သိပ်မလွယ်ဘူးလေ)
(၂). CHIA SEED တစ်ခွက်သောက် ထားရုံနဲ့ ဗိုက်ပြည့်စေပြီး အစာစားချင်စိတ်ကို ပုံမှန်ထက် လျော့နည်းနေစေပါတယ် ဆာလောင်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ (ပိုများများသောက်ရင် အစာ မစားပဲ အချိန်ကြာကြာ ပိုနေနိူင်ပါတယ်)
(၃). Carbohydrate, Protein, Potassium, Magnesium, Iron, Calcium နဲ့တခြား Vitamins & Minerals တွေ ပုံမှန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်,နို့, အစားအစာတွေထက် ပိုမိုပါဝင်လို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရကိုလည်း ပြည့်စုံစေပါတယ်။ (အာဟာရပါဝင်မှု အသေးစိတ်ကိုတော့ ပုံမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်)
(၄).OMEGA3, OMEGA6(ငါးကြီးဆီ)တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပုံမှန်ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါလှပါတယ်။ကင်ဆာရောဂါ,နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများမဖြစ်အောင် တားဆီး ပေးပါတယ်, သွေးတွင်းအဆီလည်းကျစေပြီး လေဖြတ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်, အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှလည်းတားဆီးပေးပါတယ်။
(၅).ဓာတ်တိုးဟန့်တားပစ္စည်းAntioxidants ဟာ ခန္တာကိုယ်ရဲ့ရောဂါပြီးစနစ်ကို တိုးတက်စေပြီး ကင်ဆာ,နှလုံးရောဂါနှင့် အခြားရောဂါများအလွယ်တကူမဖြစ် နိူင်အောင်ဟန့်တားပေးပါတယ်။
(၆).Antioxidantsဟာအရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်း ရင့်ရော်ခြင်းကိုလည်းတားဆီး ပေးပါတယ်။
(၇). သကြားဓာတ်လုံးဝမပါဝင်လို့ ဆီးချို၊ သွေးချို သမားများအတွက်လည်း သောက်သုံးရန် သင့်တော်ပါတယ်။ Cholesterol လုံးဝ မပါပါ။
(၈).သဘာဝ အစေ့ ဖြစ်လို့ ပုံမှန်ကျန်းမာနေသူများအတွက်ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိပါ။ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ဆေးများပုံမှန်စွဲ သောက်နေရသူများ ကတော့ မိမိတို့ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်သင့်ပါတယ်။
>>> ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်သူများ၊ body weightချ ချင်သူများကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် တွေကိုပါ တွဲဖက် လုပ်ဆောင် သင့်ပါတယ်။
(၁).ကယ်လိုရီများသောအစာများလျှော့စားရပါမယ်။(ဆီကြော်စာဖြစ်သော အကြော်မျိုးစုံ, ထောပတ်,အဆီများသော နိူ့ထွက် အစားအစာများ, အုန်းနို့ပါသော အစားအစာ မျိုးစုံ, ဟင်းအဆီအနှစ်များ, ဆိတ်,အမဲ,ဝက် အဆီများ, ကြက်အဆီ နှင့် အရေခွံများ)
(၂).ကစီဓာတ်များသော အစာများ ဆန်,ဂျုံ,အားလူး,သကြား,အချိုရည် နှင့် ချိုလွန်းသော အစားအစာများ လျှော့စား ရပါမယ်.
(၃).အဆီမပါသော အသားများ, ငါးမျိုးစုံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီးဝလံများ များများ စားပေးရပါမယ်။
(၄).နံနက်စာ နှင့် နေ့လည်စာကို သင့်တင့်ရုံ စားပြီး အထူးသဖြင့်ညစာကို လျှော့စားမှသာ မြန်မြန်weightကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
>>> CHIA SEED အသုံးပြုနည်း လေးကတော့ ..
CHIA SEEDကို ပွလာအောင်အရင် ရေစိမ်ပြီးမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖျော်ရည်မျိုးစုံ, ကွေကာအုပ်, နွားနို့, ဒိန်ချဉ်တို့နှင့်လည်း ရောသောက်နိူင်ပါတယ် Salad နှင့် ဆန်ပြုတ် ထဲလည်း ထည့်စားလို့ရပါတယ်။ သကြားလျှော့ထားသော အချိုပွဲ မျိုးစုံ, ပူတင်း, မုန့်မျိုးစုံ, ဟင်းမျိုးစုံ, စားသောက်ဖွယ်မျိုးစုံထဲ လည်းထည့်စား နိူင်ပါတယ်။
CHIA SEED ကို စိတ်ဝင်စားလို့ စမ်းပြီးစားကြည့်ချင်သူများ"Yangon Good Food " Page မှာ ဝယ်လို့ရပါတယ်။
280 g တစ်ဘူး ကို 9000 ကျပ်ပါ။
ရန်ကုန် မန်းလေး မြို့နယ်လိုက် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
CHIA SEEDနှင့် ပက်သက်သော လိုအပ်တာတွေကိုလည်း အကြံပြု ဖြည့်စွက် မျှဝေနိူင်ကြပါတယ်။YouTube နဲ့ Google Serch မှာလည်းရှာကြည့်နိူင်ပါတယ်။
၃၀၀၀၀ ကျပ် ပြည့်လျှင် အခမဲ့ပို့ပေးပါတယ်။
Chia seed 280g
Read 3641 times.